UTC+08:00 - ဝီကီပီးဒီးယား
UTC+08:00 ~ 120 degrees E – တနှစ်ပတ်လုံး
ဒေသစံတော်ချိန်: ၂၀၂၁-၁၁-၂၆ ၂၁:၀၄:၄၁ ရှင်းသန့်
UTC+08:00 ဆိုသည်မှာ UTC time offset ၏ +08:00 တွင်ရှိသော အချိန်ဇုန်၏ အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်သည်။ ISO 8601 အရ အဆိုပါအချိန်အား 2016-05-03T06:04:12+08:00 ဟု ရေးသားဖော်ပြလေ့ရှိသည်။
ထိုအချိန်ဇုန်အတွင်း ခန့်မှန့်လူဦးရေ ၁.၇၀၈ ဘီလီယံ နေထိုင်ကြရာ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာလူဦးရေ၏ ၂၄% ရှိရာ ကမ္ဘာပေါ်တွင် လူဦးရေ အများပြားဆုံး နေထိုင်သော အချိန်ဇုန်ဖြစ်ပြီး အာဆီယံ စံတော်ချိန်အဖြစ် အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်ထားသော အချိန်ဇုန်လည်း ဖြစ်သည်။
ထိုအချိန်ဇုန်ကို တရုတ်စကားပြော နိုင်ငံများအားလုံး အသုံးပြုကြပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသို့ လွှတ်တင်ထားသော တရုတ်ဝဘ်ဆိုက်များသည်လည်း အဆိုပါအချိန်ကိုပင် အသုံးပြုကြသည်။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်အပိုင်း (တောင်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ) တွင် ၁၉၇၅ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ ရက် ကွန်မြူနစ်တို့ တောင်ပိုင်းကို သိမ်းပိုက်ခြင်း မတိုင်မီထိ အဆိုပါအချိန်ဇုန်ကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး မြောက်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံထက် ၁ နာရီ အချိန်ရှေ့သို့ရောက်နေသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် တနိုင်ငံလုံးသည် မြောက်ဗီယက်နမ်များအသုံးပြုကြသော အချိန်ဇုန်ဖြစ်သည့် UTC+07:00 ကို အသုံးပြုလာကြသည်။
၁ စံတော်ချိန်အဖြစ် (မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်း ဆောင်းရာသီ)
၂ နေ့အလင်းရောင် ထိန်းသိမ်းသော အချိန်အဖြစ် (မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်း နွေရာသီ)
၄ တရားဝင် UTC+08 နှင့် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ UTC+08 တို့အကြား ကွဲပြားခြားနားမှု
၄.၁ UTC+08 လောင်ဂျီကျူအတွင်းတွင်ရှိသော ဒေသများဖြစ်သော်လည်း အခြားအချိန်ဇုန် အသုံးပြုခြင်း
၄.၂ UTC+08 လောင်ဂျီကျူ အပြင်တွင်ရှိသော ဒေသများဖြစ်သောလည်း UTC+08 အချိန်ကို အသုံးပြုခြင်း
၄.၂.၁ လောင်ဂျီကျူ 127°30′ E နှင့် 142°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+09)
၄.၂.၂ လောင်ဂျီကျူ 97°30′ E နှင့် 112°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+07)
၄.၂.၃ လောင်ဂျီကျူ 82°30′ E နှင့် 97°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+06)
၄.၂.၄ လောင်ဂျီကျူ 67°30′ E နှင့် 82°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+05)
စံတော်ချိန်အဖြစ် (မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်း ဆောင်းရာသီ)[ပြင်ဆင်ရန်]
မွန်ဂိုလီးယား (နိုင်ငံတဝန်းအများစု) - မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသုံး အချိန်များ
နေ့အလင်းရောင် ထိန်းသိမ်းသော အချိန်အဖြစ် (မြောက်ဘက်ကမ္ဘာခြမ်း နွေရာသီ)[ပြင်ဆင်ရန်]
မွန်ဂိုလီးယား (အနောက်ဘက်ဒေသ) - မွန်ဂိုလီးယားနိုင်ငံသုံး အချိန်
Hovd မြို့အပါအဝင် အနောက်ပိုင်းဒေသ
ရုရှား - အီရ်ကုထ်စ် စံတော်ချိန်
တရုတ်နိုင်ငံ (ပြည်မကြီး) - တရုတ်နိုင်ငံ စံတော်ချိန် (ပေကျင်း စံတော်ချိန်)
ဟောင်ကောင် - ဟောင်ကောင် စံတော်ချိန်
မကာအို - မကာအို စံတော်ချိန်
ထိုင်ဝမ် - ထိုင်ဝမ်အမျိုးသား စံတော်ချိန်
ဖိလစ်ပိုင် - ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ စံတော်ချိန်
ဘရူနိုင်း - ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ စံတော်ချိန်
မလေးရှား - မလေးရှားနိုင်ငံ စံတော်ချိန်
စင်ကာပူ - စင်ကာပူနိုင်ငံ စံတော်ချိန်
အင်ဒိုနီးရှား (Central areas) - အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသုံး အချိန်များ
East နှင့် South Kalimantan
ဩစတြေးလျ - ဩစတြေးလျနိုင်ငံသုံး အချိန်များ
အန္တာတိကတိုက်ရှိ အချို့အခြေစိုက်စခန်းများ - အန္တာတိကတိုက်တွင်သုံးသော အချိန်ဇုန်များ
တရားဝင် UTC+08 နှင့် ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာ UTC+08 တို့အကြား ကွဲပြားခြားနားမှု[ပြင်ဆင်ရန်]
UTC+08 လောင်ဂျီကျူအတွင်းတွင်ရှိသော ဒေသများဖြစ်သော်လည်း အခြားအချိန်ဇုန် အသုံးပြုခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
သက်ဆိုင်သော ဧရိယာမှာ 112°30′ E မှ 127°30′ E လောင်ဂျီကျူအတွင်း ဖြစ်သည်။
UTC+07:00 ကို အသုံးပြုသော Surabaya အပါအဝင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းများ
UTC+09:00 ကို အသုံးပြုသော တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ၏ မြို့တော် ဆိုးလ်မြို့အပါအဝင် ကိုရီးယားဒေသ၏ အနောက်ဘက်ပိုင်း ဒေသများ
UTC+08 လောင်ဂျီကျူ အပြင်တွင်ရှိသော ဒေသများဖြစ်သောလည်း UTC+08 အချိန်ကို အသုံးပြုခြင်း[ပြင်ဆင်ရန်]
လောင်ဂျီကျူ 127°30′ E နှင့် 142°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+09)[ပြင်ဆင်ရန်]
Heilongjiang province အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံ အရှေ့ဘက်စွန်းဒေသများ
လောင်ဂျီကျူ 97°30′ E နှင့် 112°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+07)[ပြင်ဆင်ရန်]
Guangxi Province နှင့် Hainan Island အပါအဝင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဒေသများ
မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သော မြို့တော် ဦလန်ဘာတာမြို့အပါအဝင်
Western part of ဘော်နီယိုကျွန်း၏ အနောက်ဘက်ပိုင်းဒေသများဖြစ်သော ဆာရာဝပ်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းဒေသ
လောင်ဂျီကျူ 82°30′ E နှင့် 97°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+06)[ပြင်ဆင်ရန်]
Xinjiang province၏ ဒေသအများစု (ဒေသစံတော်ချိန်အဖြစ် UTC+06 သတ်မှတ်ထားပြီး တရားဝင်စံတော်ချိန်မှာ UTC+08 ဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် အလုပ်ချိန်နှင့် ဆိုင်ဖွင့်ချိန်အချိန်ဇယားများသည် ပေကျင်းထက် ၂ နာရီမျှနောက်ကျနေသည်။) See also Time in China.
လောင်ဂျီကျူ 67°30′ E နှင့် 82°30′ E အတွင်းရှိသော ဒေသများ (အမှန်တကယ်အချိန်ဇုန် UTC+05)[ပြင်ဆင်ရန်]
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်ပိုင်းဒေသများ ဖြစ်သော Xinjiang province အနောက်ပိုင်းဒေသ (ဒေသစံတော်ချိန်မှာ UTC+06 ဟုသတ်မှတ်ထားသော်လည်း တရားဝင်စံတော်ချိန်မှာ UTC+08 ဖြစ်သည်။)
↑ HOVT – Hovd Time။ Asian time zones။ Time and Date။ 14 July 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
ဟောင်ကောင်၏ အချိန်ဝန်ဆောင်မှု သမိုင်း Archived 22 May 2009 at the Wayback Machine.
စာလုံးစောင်းများ - သမိုင်းတွင်အသုံးပြုခဲ့သော သို့
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=UTC%2B08:00&oldid=708425" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၈:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။